Kaydka Mansilla ayaa ka tagaya magaalo ay abaartu daboolka ka qaaday | Saadaasha Shabakadda
Abaaraha bilihii la soo dhaafay sababay in heerka baraagno badan oo ku yaal Spain oo dhan ay hoos u dhacaan. Gaar ahaan keydka Riojan Mansilla oo ku jira heer ka hooseeya sidii hore. Iyada oo kaliya 14,7% ee awooddeeda, keydkan wuxuu ku dhuuntay biyaheeda gadaasheeda magaalo yar oo hooray ilaa 1960.
Xilligan, abaarta iyo heerarka biyaha oo hooseeya awgood, reer Mansillans waxay awoodaan inay ku dhex socdaan magaalada hadda soo ifbaxday. Abaarta ayaa halakeyn karta kaydadka sida aan hada aragno.
1 Abaar iyo xaalufinta kaydadka biyaha
2 Kahor dhismaha biyo xireenka
Abaar iyo xaalufinta kaydadka biyaha
Caadi ahaan, muwaadiniinta Mansilla de la Sierra waxay qubeystaan ​​xagaa kasta xagaaga kaydka ah si ay uga caawiyaan la dagaalanka heerkulka sare. Si kastaba ha noqotee, abaaruhu uma oggolaan maydhashada madadaalada sannadkan, laakiin waxay martidiisa siisay socod xiiso leh oo ay ku marayaan jidadka magaalo buur duug ah.
Magaalada "lagu ogaadey" ka bixitaanka biyaha kaydka waxay lahayd 600 oo qof oo waxay ahayd madaxa gobolka, marka la barbardhigo 71ka hadda diiwaangashan.
Baraf yaraanta jiilaalkii la soo dhaafay iyo roob la’aanta bilihii la soo dhaafay ayaa hoos u dhigay heerka biyaha oo gaarsiiyay heer taariikhi ah, sidaa darteed bishaan waxaad horeyba u arki kartaa magaalada oo dhan, waxaadna ku socon kartaa jidadkeeda iyo fagaarayaasha dhib la’aan.
Kahor dhismaha biyo xireenka
Dhamaan muwaadiniinta Mansilla de la Sierra ee da'doodu ka weyn tahay 60 sano ayaa awooday inay ogaadaan magaaladan oo dhan. Iyagoo wajahaya go'aanka ah in la dhiso biyo xireen loogu talagalay waraabka iyo biyo gelinta, reer Mansillans waxay ahayd inay ka baxaan magaalada si ay awood ugu yeeshaan inay biyo xireen biyahaas oo dhan.
Mansillans ka waawayn ayaa socod ku maraya waddooyinka magaaladooda iyagoo faraxsan waxayna u sheegaan carruurta ay sii dhaleen awgood halka ay guryahoodu ahaayeen oo ay si dheer u warwareegayeen.
In kasta oo ay tani u muuqan karto dhacdo layaableh, tixgeli halista arrinta iyo waxa loola jeedo: abaar sidaadan waligaa arag. Taasi waa, kayd biyo ah oo awooddiisu tahay 14% taas oo, hubaal, in wax walba aan la isticmaali karin, abaar dheer oo daran awgeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Kaydka Mansilla ayaa ka tagaya magaalo ay abaartu daboolka ka qaaday